कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला निर्णायक‌,‌ दुबैतिरबाट तानातान!!!! - aajakoparibesh
कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला निर्णायक‌,‌ दुबैतिरबाट तानातान!!!!
काठमाडौँ। कांग्रेसमा आसन्न महाधिवेशनको माहोल अघि बढ्दै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दुवैका नजर नेता कृष्णप्रसाद सिटौलातिर छन् । आफ्नो समूहलाई एकढिक्का बनाइराख्न सकेको खण्डमा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको तुलोमा सिटौला जता उभिन्छन्, उतै पल्लाभारी हुने सम्भावना छ ।
पार्टी सञ्चालनका लागि दुई वर्ष आफूले ‘ब्ल्यांक चेक’ दिँदा देउवाले दुरुपयोग गरेको भन्दै उनले संस्थापन पक्षमा नभएको घोषणा गरेका थिए । यति बेला उनी आफ्नै समूहलाई अघि बढाउने ठाउँमा आइपुगेका छन् । हिमाल पोस्ट